Haday kugu cusub tahay iyo hadaad hore ula socotayba, qurxinta cagahu waxay ahayd mid soo jireen ah oo haweenka Soomaliyeed aad u xiiseeyaan. Iyadoo hubaal tahay in marsashada xinaha, silsiladaha cagaha lagu xidho iyo waliba kabaha quruxda badani yihin hababka ugu caansan ee dumarku adeegsadaan, siday soo jiidasho gaar ah uGu sameyaan xubnahooda hoose. waxa imika badatay xidhashada kaatumada cagaha, iyadoo naqshadaha iyo dhaxagaanta lagu sameeyaa noqdeen qaar marba marka ka danbeeya ka sii qurux badanaya kuwii sanadahii hore. Silsiladaha cagaha oo iyaguna noqday kuwo ku koobneyn kaliya bir ayaa, imika 2013 lagu soo bandhigay dalka maraykanka kuwu ka duwan kuwii soo jireenka ahaa. Waxaana hubaal ah in gabadha u badheedhaa tahay mid aan ka shiixayn marnaba in cagaheeda la eego, oo kalsooni buuxda ka qabta quruxdooda.